राजकुमार सुनार बचाउ अभियान « Janata Samachar
#जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड
राजकुमार सुनार बचाउ अभियान
प्रकाशित मिति : 12 June, 2018 3:39 pm
काठमाडौँ । मृगौला पीडित राजकुमार सुनारको उपचारार्थ लण्डन, अमेरिका र कतारवासी नेपालीहरुले सहयोग गरेका छन् । धादिङका २३ वर्षीय सुनारको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सहयोग स्वरुप जनताकर्मी शोभा त्रिपाठीको सक्रियतामा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले रकम संकलन गरी पठाएको एक लाख ८ हजार रुपैयाँ नगद सोमबार सुनारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
काठमाडौँस्थित आर्मी अफिसर्स क्लव भद्रकालीमा सोमबार आयोजित टीका वोम्जन एकल साँझको अबसरमा सञ्चारकर्मी शोभाले उक्त रकम प्रदान गर्नुभएको हो । संगीतकर्मी टीका वाेम्जन र त्रिपाठीले नेपाल तथा बिदेशमा सहयाेगका लागि अभियान चलाउनु भएकाे हाे ।
लण्डन निवासी रमा दुराको संयोजकत्वमा अाप्रवासी नेपालीरूबाट ८५ हजार रुपैयाँ संकलन गरी नेपाल पठाउनु भएको हो । संगीतकार तथा गायक वोम्जनले पनि एकल साँझबाट प्राप्त रकम ३० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो । सुनारकाे उपचारका लागि हालसम्म देश तथा बिदेशबाट गरी जम्मा तीन लाख ९५ हजार रकम संकलन भएकाे छ । उनकाे मृगाैला प्रत्याराेपणका लागि अझै करिब सात लाख अावश्यक पर्ने बताइएकाे छ । दुबै मृगाैला फेल भएका सुनारकाे हाल अाराेग्य स्वास्थ्य प्रतिस्ठान ललितपुरमा डा सुमित अाचार्यकाे निगरानीमा उपचार भइरहेकाे छ । उनकी श्रीमती मृगाैला दिन तयार भए पनि अार्थिक अभाबका कारण प्रत्याराेपण हुन सकेकाे छैन ।
सुनारकाे उपचार खर्च संकलनका लागि छिट्टै कलाकारहरूकाे च्यारिटी साेकाे समेत अायाेजना गर्ने तयारी गरिएकाे अभियानकर्मी त्रिपाठीले बताउनुभयाे।
म्रिगौला पिडीत राजकुमार सुनारको लागि सहयोगदाताहरू
1. राधा दुरा (गोठपानी, लम्जुङ हाल विन्चेस्टर) – £36.76
2. दुर्गा गुरुङ्ग (सेरा, लम्जुङ हाल दिपकट) £20
3. हरि बहादुर दुरा (तान्द्राङ, लम्जुङ हाल विन्चेस्टर) £20
4. मिथुन (ललितपुर हाल विन्चेस्टर) £40
5. गणेश बहादुर दुरा (तान्द्रङ हाल विन्चेस्टर) -£20
6. लीलाराम गुरुङ (गोठपानी, तान्द्रङ हाल विन्चेस्टर) – £101
7. रविन गुरुङ (ललितपुर हाल ब्रयाम्कोट, यूके) – £50
8. हम दुरा (पोखरा हाल इष्टली) – £10
9. कर्ण दुरा (ठुलोस्वरा हाल प्लम्स्टेड) £10
10. ईन्द्र बहादुर दुरा (नास्के हाल प्लम्स्टेड) £30
11. तुल्सी दुरा (नास्के हाल यूके) – £10
12. फारम दुरा (मकैस्वरा हाल प्लम्स्टेड) – £10
13. मिम दुरा (ठुलोस्वरा हाल इष्टली) – £10
14. हरि बहादुर दुरा (धकल्थोक हाल प्लम्स्टेड) – £10
15. सिङ बहादुर दुरा (नेटा हाल इष्टली) – £10
16. हरि बहादुर दुरा (भाँगु हाल विन्चेस्टर) – £10
17. उमा दुरा (सुम्ले हाल फोल्क्स्टन) £10
18. सुक बहादुर दुरा (लाङ्दी हाल फोल्क्स्टन) £10
19. धन दुरा (बासपानी हाल रेडिङ) – £30
20. साईशा (USA 50 डलर) £36.14
21. सु Sue ( विन्चेस्टर) – £10
22. वाज्डा तबस्सुम (India हाल विन्चेस्टर) – £15
23. तेज भण्डारी कतार 8000 रूपैयाँ
24. लाइक नेपाल 1 लाख 79 हजार
25. महादेवबेसी महाेत्सव, धादिङ 59 हजार
26. पृथ्वी थकाली, काठमाडाैँ- 35 हजार
काठमाडौं । चरेससहित एक युवती पक्राउ परेकी छिन् । बुधबार लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरले नुवाकोटको
काठमाडौं । भौतिक तथा विकाश मन्त्रालयका उपसचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेमाथि आफ्नै छिमेकी कुटेको आरोप लागेको छ